Mariela Carril | | ဘာလီကျွန်း, အင်ဒိုနီးရှား
သူတို့ကအဖြစ်လူသိများကြသည် ဘာလီမျက်နှာဖုံးများ သင်သည်သူတို့ကိုသူတို့ကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအဖြစ်ဝယ်ပြီးသင်၏အိမ်နံရံတွင်ချိတ်ဆွဲထားနိုင်သော်လည်းထိုနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်၎င်းတို့သည်အလွန်အရေးပါသည်။ ဘာမှမ ၀ ယ်နိုင်အောင်သူ့ရဲ့ရင်းမြစ်၊ အသုံးပြုမှုနဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုကြည့်ရအောင်။
3 Topeng မျက်နှာဖုံးများ
4 Barong မျက်နှာဖုံးများ
မျက်နှာဖုံးများ ရိုးရာအင်ဒိုနီးရှားကခုန်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် သူရဲကောင်းများ၊ ဒဏ္myာရီများ၊ ဘုရင်များနှင့်အခြားအရာများကိုလှည့်ပတ်နေသောရိုးရာပုံပြင်များကိုဖန်တီးပေးသည်။ အကသမားတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ဂီတပညာရှင်တွေရှိတယ်။ ဒီအကဟာရှေးဟောင်းတွေဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီ့မျက်နှာဖုံးတွေကို ၁၅ ရာစုလောက်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တယ်။
သူတို့ကိုခေါ်တယ် ထိပ်တန်း အင်ဒိုနီးရှားနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလောကအကများနှင့်ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘိုးဘွားများနှင့်နတ်ဘုရားများကိုဂုဏ်တင်သောအင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတို့၏အကများ၊
အချိန်တန်သော်ဘုရားသခင့်စေတမန်များအားကိုယ်စားပြုသူများသည်မျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ဆင်လာကြသည်။ ဒီနေ့သင်ရှာနိုင်သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်မျက်နှာဖုံးများ ဒါပေမယ့်အနုပညာလက်ရာတွေလို့ယူဆကြတဲ့မျက်နှာဖုံးအများအပြားရှိပြီးဘာလီကျေးရွာတိုင်းမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရှိတယ်။
အမှန်မှာကျေးရွာတစ်ရွာစီတွင်ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာဖုံးစတိုင်ရှိသည် မက်သည်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားသောရွာဖြစ်ပြီးမျက်နှာဖုံးများကိုထွင်းထုခြင်း၊။ ၎င်းနေရာသည်သေးငယ်သော်လည်း၎င်း၏လမ်းများသည်အင်ဒိုနီးရှားတစ်နိုင်ငံလုံးရှိစတိုင်များကိုထုတ်လုပ်ပြီးရောင်းချသောစျေးဆိုင်များနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်ပိုမိုခေတ်မီ။ ပိုမိုရိုးရာ၊ ပိုမိုစရိုက်လက္ခဏာ၊ အရောင်နည်းသောမျက်နှာဖုံးများပြုလုပ်ကြသည်။ အရာအားလုံး၏။ တကယ်တော့ပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ် 30 ကွဲပြားခြားနားသော tools တွေကို မျက်နှာဖုံး၏အခြေခံသစ်သားထွင်းရန်။ ဒီသစ်သားရှိနိုင်ပါသည် ၏သစ်သား suar, အ အိပ်, အ hibiscus ဒါမှမဟုတ်ကျွန်းသစ်၊.
ဘာလီမျက်နှာဖုံးများကိုဘုရားကျောင်းများတွင်ပြုလုပ်သောထုံးတမ်းစဉ်လာများအတွက်ပြုလုပ်ထားသည်ဟိန္ဒူဘာသာတရား၏မော်ကွန်းပုံပြင်များ၊ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းသံသရာ၊ ပင်လယ်ပြင်၌ကောင်းမှု၏အောင်မြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘဝအတွေ့အကြုံများကိုဖော်ပြသောဤမျှအံ့ဖွယ်ကောင်းသောလှပသောမြင့်မြတ်သောအကများအတွက်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုတာသင်မာစတာတစ်ယောက်ထံမှသင်ခန်းစာယူထားတဲ့အရာဖြစ်တယ် အနုပညာက တစ်ဆက်မှတစ်ဆက်သို့ကူးပြောင်းသွားသည်။ အဆိုပါပန်းပု၏နာမဖြင့်လူသိများသည် undagi အဖုံး ထိုမျက်နှာဖုံးသည်ဗိမ္မာန်တော်ပြီးဆုံးလျှင်၎င်းသည်မြင့်မြတ်သောမျက်နှာဖုံးပြုလုပ်ခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ထုံးတမ်းဓလေ့များကိုသာသိသောကြောင့်၎င်းသည်ဗြဟ္မန်းရဲ့အသင်း ၀ င်ဖြစ်ရပါမည်။
ရာစုနှစ်နှင့်ချီ။ ဘာလီကျီမျက်နှာဖုံးများတွင်ထိုနေရာများ၊ ဘုရားကျောင်းများနှင့်လောကပွဲတော်များရှိခဲ့သည် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်အင်ဒိုနီးရှားသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုကြည့်ရှုခဲ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရာတွေပြောင်းလဲသွားပြီ ခရီးသွားများကမျက်နှာဖုံးများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည် သူတို့အိမ်များကိုတန်ဆာဆင်ခြင်းငှါဝယ်ကြ၏။
စတိုင်လ်တွေအများကြီး၊ မျက်နှာများစွာနဲ့အရောင်တွေအများကြီးရှိလို့သူတို့ကိုစုဆောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အတွင်းပိုင်းနံရံပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားဖို့စိတ်ကူးဟာအလွန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာဖက်ရှင်နှင့်တကယ်တော့ကတည်းကအလွန်အနောက်တိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည် နံရံပေါ်ကဒီမျက်နှာဖုံးများကိုဆွဲထားဖို့ဘာလီလူမျိုးများမှမဖြစ်ပေါ်ပါဘူး.
ကမ္ဘာပေါ်ရှိဤသူများအတွက်ဘာလီဘာမျက်နှာဖုံးများသည်မြင့်မြတ်သောကြောင့်ဗိမာန်တော်ပြင်ပ၌ပြသခြင်းသည်အပြစ်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် သူတို့အသုံးမပြုသည့်အခါတိုင်းသူတို့ကိုဗိမာန်တော်အတွင်းရှိဂွမ်းအိတ်ထဲတွင်ထည့်ထားသည်။.
သငျသညျ Mas ကိုသွားလျှင်သင်သူတို့ရောင်းချကြသည်စတိုးဆိုင်များအားလုံး၌တွေ့မြင်ရလိမ့်မည် မျက်နှာဖုံးစတိုင်လေးခု - ဘာလီလူမျိုးစုမျက်နှာဖုံးများ၊ လူ့မျက်နှာဖုံးများ၊ တိရိစ္ဆာန်မျက်နှာဖုံးများ (ကြောင်များ၊ ဖားများ) နှင့်နတ်ဘုရားများသို့မဟုတ်နတ်ဆိုးများမျက်နှာဖုံးများ အလှည့်၌သူတို့အသုံးပြုသောအတွက်ကခုန်ပေါ်မူတည်။ တပြင်လုံးကိုသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနိုင်ပါတယ်။
အကများပြောခြင်း၊ အဆိုပါမျက်နှာဖုံးများကိုအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည် ကက Barong y Topeng သူတို့ Wayan kulit ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကူးယူဘယ်မှာ။ Topeng အကများသည်မြင့်မြတ်သောလူမျိုးများ၊ ဘုရင်များနှင့်မိဖုရားများအကြောင်းကိုပြောပြသည်။ Barong သည်ကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှု၊ Barong နှင့် Rangda အကြားစစ်ပွဲများကိုအမြဲတမ်းလည်ပတ်နေစဉ်ရယ်စရာကောင်းသောသို့မဟုတ်မေးခွန်းအချို့သို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသင်ကြားမှုများပါ ၀ င်နိုင်သည်။
သူတို့ကိုယောက်ျားတွေပဲသုံးတယ် နှင့်ဤသိပ်ပြီး - သရုပ်ဆောင်တွေတစ်ခုလုံးကိုအကအခုန်ကာလအတွင်းပေမယ့်အများအပြားမသုံးကြဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မျက်နှာဖုံးတစ်ခုလုံးအကယ်၍ ၎င်းသည်မင်းသားတစ်ပါးသို့မဟုတ်ဘုရင်တစ်ပါး၏ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်လျှင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကိုအသုံးပြုသည် မျက်နှာဖုံးတစ်ဝက် ဒါမှမဟုတ်ရယ်စရာကောင်းတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေဒါမှမဟုတ်လူရွှင်တော်တွေကိုကိုယ်စားပြုမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရူးသွပ်နေတဲ့ရောဂါတစ်ခုကိုဖြစ်ပျက်လာရင်ရောဂါတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ဖို့အကြောင်းပါ။
ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ် Topeng Krasအခွင့်အာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ် Topeng အဟောင်း, ရယ်စရာလူအိုနှင့်သူ၏ပြက်လုံးများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲပရိသတ်ကိုနှင့်ဖျော်ဖြေဖို့ရည်ရွယ်သည် Topeng Manis, အငြင်းပွားဖွယ်သူရဲကောင်း။
ဇာတ်လမ်းကိုအလယ်၌မျက်နှာဖုံးဖြင့်ပြောသောမျက်နှာဖုံးဇာတ်ကောင်တစ်ချောင်းရှိသည်၊ သူ့ကိုစကားပြောရန်ခွင့်ပြုသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤအက္ခရာနှစ်မျိုးရှိပြီး၊ သိပ်ပြီးအကများ၊ တိုက်ပွဲအချို့နှင့်စကားမပြောသောဇာတ်ကောင်များရှိသည်။ လူ့ခံစားချက်များ၏စကြဝuniverseာတစ်ခုလုံးသည်ထိုတွင်ကိုယ်စားပြုသည်။
လည်း အများအပြား "မော်ဒယ်များ" ရှိပါတယ် သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံးမှာကျွဲ၊ ဝက်နှင့်ခြင်္သေ့မျက်နှာဖုံးများဖြစ်သည်။ သူတို့မှာရယ်စရာအသုံးအနှုန်းတွေရှိပြီးနားတွေနှာခေါင်းတွေထွင်းထုထားတယ်။
ကျနော်တို့မတိုင်မီကပြောခဲ့ပါပြီ အက Barong မကောင်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောအကောင်းများ၏စစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်Barong နတ်ဘုရား၏အဓိကအားဖြင့် Rangda နတ်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်သည်။ ထို့နောက် မျက်နှာဖုံးများ Rangda သူတို့ကမာရ်နတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ပါးစပ်တွေ၊ မျက်လုံးတွေကျယ်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့လျှာတွေရှိတယ်။
ဒီမျက်နှာဖုံးနှစ်ခုလုံးကိုကောင်းစွာထွင်းထုထားရင်၊ သူတို့ကရာဂဏန်းအနည်းငယ်ယူနိုင်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြီးဆုံးဖို့အရှည်ဆုံးပဲ။ ပန်းပုဆရာသည်အလုပ်တွင်လေးလခန့်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်မျက်နှာဖုံးအကြောင်းနှစ်လသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းကြာပါသည်။
နှင့်အညီ၊ အလုပ်ချိန်နည်းသောကြောင့်စျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းအရောင်ခြယ် သ၍ အရောင်များပြားလွန်း။ ခေတ်မီသောကြောင့်သူတို့၏ပစ္စည်းများသည်လည်းစျေးသက်သာသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရိုးရိုးလေးနှင့်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသော၊ အလွန်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်သာပေးလိုလျှင်၊ သင်သည်ဤနောက်ဆုံးမျက်နှာဖုံးများကိုညွှန်ပြသင့်သည်၊ သို့သော်သင့်အနုပညာသည်သို့မဟုတ်စုဆောင်းနေလျှင်ထိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကောင်းစွာကြည့်ရှုပါ။
အဆိုပါမျက်နှာဖုံးများနှင့်အတူလိုက်ပါသည့်ဝတ်စုံကိုလည်းသူတို့နေရာရှိသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ရွာလုံးသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုမှာပါ ၀ င်ပြီးမြင်းဆံပင်၊ ကျွဲ၊ ဆိတ်အသားအရေ၊ တိရိစ္ဆာန်သွားတွေအပါအ ၀ င်အချိန်ကုန်၊ ပစ္စည်းများလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုးဆေးတွေဖြစ်လာတာပါ။
ဒီကမ္ဘာကြီးကိုသွားပြီးကခုန်ခြင်းနှင့်သူတို့၏မျက်နှာဖုံးများကိုသင်အံ့အားသင့်မိသောအခါအလွန်ညစ်ပတ်သောအရာများကိုပြန်မယူမိစေရန်အနည်းငယ်သောအရာများကိုမှတ်မိဖို့လိုသည်။ မက်စရွာကို ဦး တည်။ လမ်းများပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုရှာဖွေပါ။ ဆရာကမည်သည့်အလုပ်များလုပ်သည်၊ မည်မျှအသုံးချသည်နှင့်သူ့အလုပ်၏ပုံစံကိုကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ဘာလီကျွန်း » ဘာလီမျက်နှာဖုံးများ